Mid ka mid ah waxyaabaha ugu weyn ee ku saabsan awooda shabakadaha TiVo ayaa waxaa ku daray xirnaanta qalabka aad wireless sida kiniiniga iyo casriga ah. App Android lagu daray dukaanka Play Google dhawaan in ay isu barbar app Apple in markii hore loo soo bandhigay si xubnuhu la qalabka TiVo, gaar ahaan Roamio ah. Waxayna u shaqaysaa iyadoo TiVo kasta oo awood u qoro HD, oo uu idin wada siiyo awood ay ku xakamayso TiVo iyadoo aan loo eegayn meesha aad joogto.
Isticmaal app si ay u baadhaan, heli info oo ku saabsan actor ah, ama barnaamijka ku pass xilli. App ugu weyn waa lacag la'aan. On taxane wayn ee TiVos, kuwaas oo taxanaha 3, aad ma awoodi doonaan in ay isticmaalaan app si aad u aragto waxa ka muuqda ayaa la diiwaangeliyey, maareeyaan cajalado kuwa, ama heli info on show in uu ka ciyaaro.
Waxaa jira qaar ka mid xal kale app TiVo ee android in aad kala soo bixi kartaa, sidoo kale, iyo qaar badan oo iyaga ka mid ah sidoo kale waa lacag la'aan. Bal aan eegno toban ka mid ah oo kale ugu fiican.
App Tani lacag la'aan ah uu helo calaamadaha sare ay u fududaato in la isticmaalo iyo guud ahaan farxad user la soo saarka. Waxaa ugu rarataan culaysyo aad Android phone ku shaqeeya ama kiniin ah oo kuu ogolaanaya in aad jadwal cajalado xaqa aad u leedahay ka qalab aad, meel kasta oo aad tahay, guriga ama iska. Haddii aad rabto in aad isticmaasho app this, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u hesho qalab Vulkano ah. Waxay ka shaqaysaa on 3G iyo shabakadaha phone wireless kor, sidoo kale Wi-Fi. Badhamada ay ballaaran yihiin oo aad u muuqda oo fudud si ay u maraan shaashad yar.
2. RCX u TiVo (free)
Tani waa tii ugu horaysay ee labada barnaamijyadooda RCX si ay u sameeyaan naga liiska. Tani waxay la mid hore waa version xorta ah, laakiin uma waxaa u dhiman muuqaalada. Users jecel sida ay u fududahay waa in ay isticmaalaan. Waxaad isticmaali kartaa on TiVo Taxanaha kasta 3 ama cusub, oo aad ka soo dejisan kartaa in aad casriga Android ama kiniin. Waxa ay ka buuxaan qaababka sida keyboard ah shaashadda, awood buuxda raadinta, iyo Hanuun, bilowga deg deg ah. RCX lacag la'aan ah u isticmaali karaan wifi dhisay in si unugyada Roamio TiVo in ay isku xiraan. Ma ahan awoodaan inay u sameeyaan ay gacanta ku mugga, si kastaba ha ahaatee, si ay weli u baahan yahay in ay ka yimaadaan fog TV. The midabyo ee badhannada ku app iyo khariidad nadiif ah mid si fudud loo isticmaali, xataa marka aad daasho dhamaadka maalintii.
3. RCX u TiVo - bixiyo
Sida version xorta ah, waxay u shaqaysaa ku TiVo taxane 3 ama unugyo ka dib. Waxaad kala soo bixi kartaa app ah in ay ama kiniin nidaamka qalliinka Android ama aad casriga ah iyo u isticmaalaan halkii aad fog TiVo. Waxaa jira keyboard ah onscreen aad u isticmaali karto in ay ku shaqeeyaan wax by wifi, ama haddii qalab aad leedahay fur-in u keyboard USB ah, waxaad ku shuban kartaa in ay isticmaalaan iyo in halkii. TrackPad ah in la yimaado qalabka ogolaado in aad ka maqnaan wax daawanayay TV. Waxay leedahay qaabka la mid nadiif ah sida version xorta ah iyo waa ay fududahay in la isticmaalo.
4. Control Vectir Remote
Vectir dhibcaha aad u heer sare ka mid ah dadka isticmaala sida fududahay in la isticmaalo, iyo sida ay dadka u faraxsan yihiin in ay u isticmaalaan. Waxaa la qabsiga isticmaalo kombiyuutarada iyo ay gacanta ku hayso qaar ka mid ah barnaamijyada sida Windows Media Player ama Lugood. Sidaas halka aysan u xakamayso TiVo per se, waxa aanu u ogolaan in aad ku shaqeeyaan waxyaabo aad qulquli karaa iyada oo loo marayo habka ka your computer. Waxaa la iman awoodda dhismaha gacanta fog iyada oo loo marayo barnaamijka naqshadeeye. App waxa kale oo aan samayn karo gacanta mugga oo qaar ka mid ah ma sheegi karo. Waxaa ka shaqeeya by Wi-Fi ama Bluetooth. Iyada oo app, waxaad isticmaali kartaa maktabadaha warbaahinta iyo playlists adigoo garaacaya ereyada in warbixin ku saabsan qalabka ama amarka cod.
5. Network Remote u TiVo
Network Remote waa app oo lacag la'aan ah in uu helo niinasaa sida sahlan waa in ay isticmaalaan. Waxay ka shaqaysaa kasta oo taxane TiVo 3 ilaa iyada oo telefoonka ku xirta TiVo by Wi-Fi. Waxaa xitaa ka raadin kartaa si aad u TiVo shabakada. Khasaare kaliya ee dadka u arkaan in ay la tahay in interface ay tahay oo keliya in soo jiidasho aan. Waa wax aad aasaasiga ah, laakiin dadka doonaya fog shaqaynaysa in ay fududahay in la isticmaalo, Network haboon Remote biilka. Qaar ka mid ah dadka isticmaala ay xitaa bedelay warshad TiVo fog la app this.
6. Quick fog: TV SideView Sony
App Tani xor ka Sony kuu ogolaanayaa inaad si ay u helaan barnaamijka Guide TV ah si aad si fudud ku heli kartaa waxa aad rabto in aad daawato. The interface dhalaalaysa waa sahlan loo akhriyi karo oo ay helaan barnaamijyo aad rabto. SideView gacanta ku hayso qalabka geeyo Sony iyo telefishin in TiVo ku xiran. Waxa kale oo ay kuu ogolaanaysaa inaad ka raadin YouTube si aad u hesho jecel videos aad. Haddii aad ku shuban gal kiniin Xperia ama casriga ah, waxaad bedeli kartaa channels ka sanduuqa set-top, sidoo kale.
7. Peel Smart Remote ee kiniin Galaxy Tab
App Tani free aad aadka loo qiimeeyo in qoyska saaxiibtinimo oo waxtar leh waqti isku mid ah. Waxaa ka shaqeeya iyagoo gacan ka geysanaya sidii aad ku heli muujinaya jecel aad, iyo aad ugu cadcad cusub. U sheeg Peel waxa ay muujinaysaa aad jeceshahay, oo ku talin doonaan muujinayso la mid ah. In badan oo aad isticmaali app ah, macluumaad ka badan Peel helo iyo in ka badan hagaagtay talooyinka uu noqon doono. Marka aad ka heli show aad jeceshahay, riix "Daawo TV-ga" oo aad u daawado. Interface waa la mid Windows 8 ama Apple qalabka, meesha aad mari si ay u isticmaalaan bedeley ama qabsato mugga. App Tani waxay sidoo kale waxaa laga heli karaa mid caalami ah, taas oo aan caadi ahayn, tan iyo markii ugu waa gaar ah gobolka. Waxaad rogto karaa iyada oo muujinaya on menu, ka dibna waxa ay ka jaftaa si ay u arkaan faahfaahin show ee, ama aad isticmaali kartaa by category. Xitaa in aad la wadaagi karto in Facebook iyo Twitter, iyo xaflad daawashada dalwaddii!
App Tani free kuu ogolaanaysaa inaad heli YouTube via computer ama qalab TV internet ah. Waxaa si ka badan sameeya, sidoo kale. Saaxiibadaa aad ku biiri karto, sidoo kale, haddii ay app. Markaas waxaad dhan yeelan karaan xiiso leh abuuraya playlists of videos cat cute in ay habeenkii oo dhan daawado. App Tani sidoo kale qaybta macluumaad ah, sidaas darteed haddii aad rabto in aad maqashaan heeso badan Koox ama aad u ogaato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qof kale oo aad aragto in video ah, riix "Mawduuca" badhanka si ay u helaan faahfaahin dheeraad ah. Adduunka ee YouTube waa sidaas oo baaxad weyn, laakiin halkan waxaad ka raadin kartaa maadooyinka oo heli waxa aad rabto inaad aragto.
9. Samsung IR - Pro Universal
App Tani ma aha lacag la'aan ah, ka duwan badan oo ku jira liiska, laakiin waxaa sidoo kale si gaar ah loogu tala galay in aad Samsung Galaxy telefoonka ama kiniin shaqeeyaan. Waxa la shaqeeya dekedda infrared inuu noqdo hago guud Koox ka mid ah qalabka, ka consoles'ka kulankii Madaxweyne Siilaanyo, in kamaradaha, si ay u rikoodhada baabuurta, si qaboojiyaha, in sanduuqyada cable. Wax soo saarka Samsung waxa la shaqayn karin waxaa ka mid ah S4 ee Galaxy iyo S5, Galaxy Tab ah, iyo Fiiro gaar ah. Ilaa iyo inta qalab uu leeyahay gudbiye IR ah, waxa ay la shaqayn doonaan app this. Sameeysa waxay diyaar u tahay caawin qabsado app in ay wax kasta oo qalab aad u rabto in aad u xirmaan, sidoo kale.
10. IR Universal Remote 10.28 APK u Android
App Tani soo dhaafay waxaan raadin doonaa sidoo kale waa lacag la'aan. Waxaaba aad casriga Samsung ama kiniin galay gacanta ku ah universal fog, in ay ka shaqeeyaan in aad TV, sanduuqa cable, iyo qalabka kale ee AV awoodaan. Waxaad astaysto goobaha iyo muuqaalka kore ee app ah, sidoo kale. Qalabka wuxuu u leedahay in ay leeyihiin feature IR Blaster in Si ay u shaqeeyaan, sida Pro Universal ee app falaa. Interface dhalaalaysa waa fududahay in la fahmo oo fudud si loo eego.
Iyada oo kala duwan sida, 'yahay ma Chine uu ka soo xusho, haddii aad rabto in la xakameeyo nidaamka oo dhan ama kaliya labo ka mid ah qalabka inta badan loo isticmaalaa. Oo inta badan ee Chine ee isagoo xor ah, miisaaniyada noqon doonaa faraxsanahay, sidoo kale.
> Resource > Android > Top 10 Beddelka TiVo App u Android